Mpamatsy boaty sy orinasa mpamokatra boaty - Mpanamboatra boaty any Shina
Flask koronosy tsipika
Tsipika famolavolana semi-mandeha ho azy
Tsipika fanamafisam-peo fanamafisana
Masinina fanotofana tavoahangy
Masinina famolavolana rivotra Multi-Piston
Milina fanamafisam-peo Piston maromaro
Masinina famolavolana jiro
Milina fanerena fanerena tsindry
Tsipika famolavolana flaskless marindrano
Masinina manamboatra flaskless
Ireo fitaovana fampidinana
Masinina mandraraka semi-mandeha ho azy
Fandefasana fantsom-pandefasana fasika amin'ny alàlan'ny fantsom-pako
Antsipiriany momba ny vokatra: ny fonosana fonosana dia fitaovana ampiasaina amin'ny famonoana vy. Rehefa miasa ny masinina mamolavola dia mitazona ny fasika ny plastika Famolavola mba hamoronana rafitra iray. Rehefa avy narotsaka tao anaty fasika namboarina izay nitazomana fonosana ny fonosana toy ny vy nandrendrika, dia hamafisina sy hoforonina amin'ny fanariana ilainao ireo fitaovana anidina. Ny fonosana fonosana dia mazàna vita amin'ny vy vita amin'ny vy ary avy eo namboarina mba hifanaraka amin'ny masontsivana. Fomba fifanakalozana 1. santionany na sary ataon'ny mpanjifa 2.Tool ...
Fandefasana fantsom-pamokarana fasika ampiasaina amin'ny boaty fanoratana
Ny fonosana fonosana dia fitaovana ampiasaina amin'ny famonoana vy. Rehefa miasa ny masinina mamolavola dia mitazona ny fasika ny plastika Famolavola mba hamoronana rafitra iray.
Famolavolana boaty ho an'ny tsindry fanamafisam-peo fanamafisam-peo
Fonosana sy fanaterana antsipirian'ny fonosana: famonosana miboridana na boaty hazo antsipiriany momba ny fandefasana: ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana ny tahiry Product Orientation 1.Fokusana amin'ny filaharana lehibe / salantsalany ary koa ireo habe kely. 2.Gray vy / Ductile fanariana vy miaraka amin'ny Resin-Bonded famafana dingana. Ny fizotran'ny fifanakalozana serivisy 1.Sample na sary ataon'ny mpanjifa 2. Tolo-kevitra momba ny lozisialy sy fifanakalozan-kevitra 3.3D Famolavolana fitaovana 4.Famokarana fanodinana 5.Fanamboarana ampahany 6.CNC Machining 7.Fitting & Fini ...
Tavoahangy ho an'ny tsipika famolavolana mandeha ho azy
Famolavolana boaty ho an'ny tsipika famolavolana ho azy
Flask no fitaovana teknolojia manan-danja amin'ny tsipika famolavolana mandeha ho azy na semi-automatique. Masinina amin'ny alàlan'ny milina CNC mandroso mba hiantohana ny fifandanjana avo lenta sy ny fifanakalozana tsara, dinihina amin'ny CMM. Fitaovana vy ductile, vy volondavenona avo lenta sy vy-vy azo azo ampiasaina, flask manana henjana avo ary mahazaka fiatraikany lehibe. Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra habe amin'ny takelaka samihafa ho an'ny zavatra takinao, ary koa manamboatra flask sy paleta fiara arakaraka ny sary sy ny famaritana ara-teknikan'ny mpanjifa.
Sandbox ao amin'ny Systerm Machine
Fonosana sy fandefasana
Antsipirian'ny fonosana: fonosana miboridana na boaty hazo
Andininy fanaterana: ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola
1. Mafy henjana.
2. Afaka mahazaka fiatraikany mahery vaika.
3. Afaka mihazakazaka tsara amin'ny tsipika famolavolana.
4. Mamolavola sy manamboatra habe samy hafa an'ny flasks ho an'ny takinao.
Ny fonosana fonosana dia fitaovana ampiasaina amin'ny famonoana vy. Rehefa miasa ny masinina mamolavola dia mitazona ny fasika ny plastika Famolavola mba hamoronana rafitra iray. Rehefa avy narotsaka tao anaty fasika namboarina izay nitazomana fonosana ny fonosana toy ny vy nandrendrika, dia hamafisina sy hoforonina amin'ny fanariana ilainao ireo fitaovana anidina. Ny fonosana fonosana dia mazàna vita amin'ny vy vita amin'ny vy ary avy eo namboarina mba hifanaraka amin'ny masontsivana.
Fandefasana fantsom-pasika fantsom-boasary fantsom-boasary fanariana fantsom-boaloboka
CONTACT US mamorona lanja ho an'ny mpanjifa
Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy, Masinina bobongolo, Famolavolana tavoahangy, Sandbox, Milina Punch Out, Famolavolana koveta fanariana,